Kosmos Suites ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းတွင်အမေရိကန်သို့ | ကိုရီးယား၏ဆိုးလ်
Kosmos Suites ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းတွင်အမေရိကန်သို့
Posted by ကို Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | လေကြောင်းလိုင်း | 0
ကိုရီးယားမှထွက်ခွာသွားရသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သော်လည်း FAL KAL ပထမတန်းစားသည်၎င်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည်။
ငါ Incheon ရှိ Orakai ဟိုတယ်မှထွက်ခွာခဲ့ပြီး KAL ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏သယ်ဆောင်သည့်အိတ်နှင့်အင်ချွန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ခရီးဆောင်အိတ်များတင်ဆောင်လာသည်။ တောင်ကိုရီးယားမှာကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ပဲ။ ငါဆိုးလ်ရှိဆွဲဆောင်မှုအနည်းငယ်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောရက်ကကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ငါအဲဒီညမှာလေထဲမှာနေပြီးတောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြီးဆန်ဖရန်စစ္စကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုသွားမယ်။ ငါမသွားချင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။ ကျွန်တော့်အလုပ်ကကျွန်တော့်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ဒါကငါပြန်လာရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကိုပြန်လာပြီး၊ ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းပထမတန်းစား Kosmos Suite 2.0၊ သီးသန့်လျှောတံခါးများပါသော! ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်အချိန်တွင်အချက်များလုံလုံလောက်လောက်မရှိသောကြောင့်လေယာဉ်ပေါ်၌ကောင်းသောညအိပ်ပျော်လိုသောကြောင့်ဤထိုင်ခုံအတွက်ကျွန်ုပ်ငွေသားပေးခဲ့သည်။ ငါလက်မှတ်လျှော့စျေးခရီးသွားလက်မှတ်အေဂျင်စီထံမှဝယ်ယူ, ဒါကြောင့်ငါ့ကို spam မှတ်ချက်မပေးပါ။ ငါလက်မှတ်အတွက်အပြည့်အဝစျေးနှုန်းမပေးခဲ့ပါဘူး
ကျွန်တော့်ကိုအင်ချွန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ KAL ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာစီးနင်းနေစဉ်ငါပြတင်းပေါက်ကနေကြည့်လိုက်တယ်။ မြို့ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးသူတို့မြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်မသွားခင်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပေါ်လာတဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။
ကလေးငယ်များကျောင်းသွားကြသည်။ တက္ကစီဒရိုင်ဘာသည်ခရီးသည်များကိုခရီးသည်များ၊ စာသင်ခန်းသို့သွားသောကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်ခွေးများကိုလမ်းလျှောက်နေသူအနည်းငယ်သာရှိသည်။ လူတွေဟာငါနဲ့တူတဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုဖြတ်သန်းနေကြတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်လာဖို့အင်ချွန်းလေဆိပ်ကိုဘတ်စကားစီးနေတယ်။
Incheon အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည်ကိုရီးယားတွင်အကြီးဆုံးသောနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်မှုကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခု၊ terminal 1996 နှင့် terminal 2001 ရှိသည်။ Yeongjong Bridge မှတဆင့်ကိုရီးယားကိုပြည်မနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆောက်လုပ်ရေးသည်ယနေ့အထိဆက်လက်တည်ရှိသည်။
KAL ဘတ်စ်ကားသည်ကိုရီးယားလေကြောင်းခရီးစဉ်ဆိပ်ကမ်းတွင်ရပ်တန့်ပြီးကျွန်တော်ဘတ်စ်ကားပေါ်မှဆင်းသွားသည်။ ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းသည်အင်ချွန်းလေဆိပ်မှဆိုးလ်သို့သွားသည့်ကိုယ်ပိုင်ကားများရှိသည်။ Orakai ဟိုတယ်အပါအ ၀ င်ကွဲပြားခြားနားသောဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များပေါ်တွင်ဘတ်စ်ကားစီးသည်။ ဘတ်စ်ကားအိတ်များထဲကငါ့အိတ်တွေကိုယူပြီးတာမင်ထဲကိုဝင်သွားတယ်။ လေဆိပ်ဟာကျယ်ပြန့်ပြီးငါရှုံးနိမ့်တဲ့အတွက်ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့ပုံပေါက်တယ်။
ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းပထမတန်းစားဘယ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ ငါပတ်ပတ်လည်ကိုမေးမြန်းနှင့်ငါရှိရာ၏အခြားအဆုံးအပေါ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးအဲဒီမှာလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ ပထမတန်းစား ounge ည့်ခန်းမှာအပြစ်ရှိတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာငါစားနိုင်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်။
ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ပထမဆုံးအတန်းအစားဝင်ရောက်မှုကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ် ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းသည်၎င်းတို့၏ပထမတန်းစားခရီးသည်များကိုစစ်ဆေးရန်အထူးသီးသန့်နေရာတစ်ခုရှိသည်။ အသစ်ရောက်ရှိလာသည့်နေရာသည်ကျယ်ပြန့်သည်။ ပထမတန်းစားခရီးသည်များအတွက်ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်ခရီးဆောင်အိတ်များချထားသည်။ surroundingရိယာပတ် ၀ န်းကျင်ရှိနံရံများသည် check ည့်ခန်းဝင်သည့်နေရာကိုလေဆိပ်၏ကျန်နှင့်ခွဲခြားထားသည်။ ဒါဟာသီးသန့်နှင့်ကျယ်ဝန်းပုံရသည်။ ကျွန်တော့်ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်း SKYPASS Select Visa Signature Card မလိုအပ်ပါဘူး။
တံခါးတွေတလျှောက်လျှောက်သွားတာနဲ့ချက်ချင်းလက်ထောက်ဆရာတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူသည်ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ပထမတန်းစားအိတ်များစစ်ဆေးသည့်ခန်းမတွင်ပြသခဲ့သည်။ အဲဒီမှာတခြား KAL အမှုထမ်းတွေကကျွန်တော့်အိတ်တွေကိုယူပြီးချိန်ပြီးစစ်ဆေးတယ်။ အဲဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာaည့်သည်တစ်ယောက်ကလိမ္မော်သီးဖျော်ရည်နဲ့အခွံမာသီးခွက်တစ်ခွက်သောက်ခဲ့တယ်။ အကုန်လုံးအကောက်ခွန်ကိုမဖြတ်ခင်ဒါတွေအားလုံး။
ကျွန်တော့်ကိုစစ်ဆေးပြီးအကောက်ခွန်နှင့်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုလေဆိပ်ရဲ့လေယာဉ်ကွင်းထဲမဝင်ခင်နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်ရောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အကောက်ခွန်ဌာန၌အခက်အခဲမရှိဘဲဆက်လက်လေ့လာခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ ၀ ိသေသလက္ခဏာနှင့်လမ်းညွှန်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ငါကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်း First Class Lounge ကိုရှာနေတာ။ ငါနေရာနှင့်ပတ်သက်။ ကြီးသောအရာတို့ကိုကြားခဲ့, ငါအဲဒီမှာရောက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်ဟာအကောက်ခွန်မဲ့လေဆိပ်စတိုးဆိုင်များမှာဈေးဝယ်ထွက်ဖို့စိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူး၊ အိပ်ရာထဲမှာထိုင်ပြီးစားသောက်ချင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုဒုတိယထပ်ဆီခေါ်သွားတဲ့ဓာတ်လှေကားကိုတွေ့လိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ KAL ပထမတန်းစားခန်းမဟာဒုတိယထပ်မှာပဲ။
ငါ၏အ KAL ပထမတန်းစားဘော်ဒါလက်မှတ်ပြပြီးနောက်, ငါ KAL ပထမ ဦး ဆုံးအတန်းအစား lounge ၏ဝင်ပေါက်တံခါးများမှရှောက်သွားလေ၏။ ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းကကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာအားလုံးပါ။ အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ခြင်းနှင့်အပြင်အဆင်ကိုကျွန်တော်သဘောကျမိသည်။ အစားအစာကအရမ်းကောင်းတယ်၊ အချိုရည်တွေပေါများတယ်။
ငါပုဂ္ဂလိကထိုင်ခုံ,ရိယာ, privacy ကိုတစ်အသိပေးနံရံများရှိပြီးသောထိုင်ခုံဆှဲ။ ကျွန်တော့်အိတ်ထဲမှာထားခဲ့ပြီးထမင်းစားခန်းကိုသွားပြီးအစားအစာပြားတစ်ခွက်နဲ့သောက်စရာအချို့ကိုကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တယ်။ လေယာဉ်မထွက်ခင် ၆ နာရီကျန်တော့လက်ပ်တော့ပ်မှရုပ်ရှင်အချို့ကိုအနားယူရန်၊ စားရန်နှင့်ကြည့်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ပထမတန်းစားလေယာဉ်ရှေ့မစီးခင်ကျွန်တော့်ကိုစိတ်ငြိမ်သက်အောင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး
အချိန်ကုန်လွန်ပြီးဂိတ် ၂၆၇ သို့မကြာမီလမ်းလျှောက်ရန်အချိန်တန်ပြီ။ ကျွန်ုပ်အတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ်အခိုက်အတန့်လေးသည်တစ်မိနစ်တိုင်းတွင်ငါလေယာဉ်ပေါ်တက်မည်ကိုဆိုလိုသည်။ ကိုရီးယားမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ငါတံခါးဝသို့သွား။ , ငါကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုစဉ်းစားလာတယ်။ ငါစတိုးဆိုင်အနည်းငယ်သို့လည်ပတ်ခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏လမ်းလျှောက်ခြင်းတံခါးကို ၂၆၇ သို့အဓိကကုန်ခဲ့ရသည်။
ငါလေယာဉ်စီးဖို့တန်းစီစောင့်ဆိုင်းကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမိနစ်အနည်းငယ်နှင့်အတူတံခါးဝတမင်တကာရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပထမတန်းစားသွားရင်တောင် ငါဘော်ဒါဂိတ်ဖြတ်ပြီးလေယာဉ်မှလမ်းလျှောက်စတင်ခဲ့သည်။ လေယာဉ်ပေါ်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာနဲ့ကိုရီးယားမှာငါ့အချိန်ကုန်ခါနီးပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။
ငါလေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့်ကိုပြပြီးလေယာဉ်အမှုထမ်းတွေရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်ပြီးလေယာဉ်ရှေ့ကိုသွားခဲ့တယ်။ Kosmos Suites 2.0 သည်နေရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပထမတန်းစားအခန်းဖြစ်သည့် Kosmos Suites 2.0 တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါမျှော်လင့်ထားသမျှကလား။
ဟုတ်တယ်၊ ငါချစ်သောအဓိကအင်္ဂါရပ်မှာသီးသန့်လျှောတံခါးဖြစ်သည်။ စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်း First Suites နှင့် ANA Airlines စီးပွားရေးအတန်းအစား“ The Room” တို့တွင်သီးသန့်လျှောတံခါးလည်းရှိသည်။ Kosmos Suites2ရှိသီးသန့်လျှောတံခါးကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျသည်။
ကျွန်ုပ်၏အခမဲ့သာယာအဆင်ပြေရေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖွင့်လိုက်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ carryon အိတ်ထဲတွင်ထည့်ပြီးဖိနပ်များကိုလည်းထုပ်ပြီးသောက်နှင့်အခွံမာကိုမှာလိုက်သည်။ ငါ Kosmos Suites 2.0 ၏သက်တောင့်သက်သာသက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုခံစားပြီးသွတ်သွင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Kosmos Suites 2.0 နှင့် ပတ်သတ်၍ အရာအားလုံးသည်ကြည့်ရှု။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတာနဲ့အိပ်လိုက်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့အစားအစာတွေကိုငါလွမ်းတယ်၊ ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ငါ suite ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးယူပြီး, ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးအတန်းအစား suite ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုကြ၏။ ငါလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့အတွက်ဒီပျံသန်းမှုဟာ Kosmos Suites 2.0 အတွင်းမှာပထမတန်းစားအတွေ့အကြုံပါ။ ၁၁ နာရီကျော်ကမလုံလောက်ဘူး။
အဆိုပါလေယာဉ်ကိုချွတ်ယူ။ San Francisco သို့ ဦး တည်အပြည့်အဝအလှည့်လုပ်လေ၏။ ငါလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုမဆုံးစေချင်ဘူး ငါ B777-300ER ICN ကို SFO takeoff မှာရိုက်ခဲ့တယ်၊ လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းပြီးချက်ချင်းပဲငါညစာစားခဲ့တယ်။
အဆိုပါလေယာဉ်ကိုချွတ်ယူ။ San Francisco သို့ ဦး တည်အပြည့်အဝအလှည့်လုပ်လေ၏။ လေယာဉ်မစီးချင်ဘူး ငါ B777-300ER ICN ကို SFO takeoff မှာရိုက်ကူးပြီးလေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းပြီးချက်ချင်းပဲငါညစာစားခဲ့တယ်။
ညစာစားရန်ရောက်လာချိန်၌ငါ onboard ဖျော်ဖြေရေးရုပ်ရှင်ရွေးချယ်မှုမှမည်သည့်ရုပ်ရှင်များကစားနေသည်ကိုကြည့်ခဲ့သည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကြည့်ရှု့ပြီးသက်တောင့်သက်သာအနားယူရန်နှင့်နံနက်စာစားရန်အချိန်သုံးရန်ရုပ်ရှင် (၃) ခန်းကိုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါပြောခဲ့သလို "မင်းပထမတန်းကိုသွားတာနဲ့စီးပွားရေးစီးပွားရေးကိုမတက်နိုင်တော့ဘူး" လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကအမေရိကန်မှကိုရီးယားသို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပျံသန်းချိန်မတိုင်ခင်အထိကျွန်ုပ်ပျောက်ဆုံးနေသောအရာကိုမသိခဲ့ပါ။
ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းသည်ကိုရီးယား၏တရားဝင်လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူတို့သည်စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်ပထမတန်းစားတို့တွင်အခန်းအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်နေမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာဂါတ်တွင်အကြိမ်များစွာပျံသန်းသည်ကိုတွေ့မြင်သည်။ Girls Generations SNSD မိန်းကလေးများသည်ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းများကိုသာပျံသန်းပါကငါလည်းလုပ်နိုင်သည် ဘယ်သူကသိမှာလဲ၊ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကိုငါမြင်လိမ့်မယ်၊ ငါလုပ်ရင်အဲဒါကိုတင်ပြီးဗွီဒီယိုတင်မယ်။ မရရှိလျှင်, ငါပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပွဲ ဦး ထွက်သမိုင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုရလိမ့်မယ် SMTown ပြတိုက်။
ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်း B777-300ER Kosmos Suites 2.0 သို့ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့ငါပြန်လာခဲ့သည့်ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Authentic နှင့်ဆွေးနွေးပါ။တောင်ကိုရီးယား၏ Youtube Youtube Channel“ စာရင်းသွင်းပါ၊ စောင့်ကြည့်ပါ၊ မှတ်ချက်နှင့်နှစ်သက်သည်။
အဆိုပါ SOK Nation ၏အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်လာ! KPop, ဘွဲ့နှင့် bulgogi မပါဝင်ပါ!
ဖယောင်းတိုင်များကိုမီးဖိုချောင်တွင်ရေးသားခြင်းသည်ညအချိန်တွင်နိုးနိုးကြားကြားရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ Sarang Haey Yo!
Disclaimer: အထက်ပါစာပိုဒ်သည်ကိုရီးယားအင်္ဂလိပ်ဟာသကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုရီးယား - အမေရိကန်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သင်မကြိုက်ပါကအထက်ပါစာပိုဒ်များကိုမဖတ်ပါနှင့်။ သိပ်နောက်ကျသွားပြီ၊
လွန်ခဲ့သောဆိုးလ်မှာ Suwon အားလပ်ရက်အင်း Express ကို။
နောက်တစ်ခုဆိုးလ်မှာ ဆိုးလ်အော်တိုအလှပြင်ဆိုင် 2018 ။